Shir Sadex Geesood ah Oo Lagu Darsayay Sicir Bararka oo Lagu Qabtay Golaha Wakiiladda | Salaan Media
Shir Sadex Geesood ah Oo Lagu Darsayay Sicir Bararka oo Lagu Qabtay Golaha Wakiiladda
Hargeysa (SM)lShir sadex gees pod ah oo ujeedadiisu tahay sidii wax looga qaban lahaa sicir barararka doolar-ka iyo maceeshada quutul daruuriga ah ayaa maanta xarunta golaha wakiilada Somaliland ku dhex maray wasaaradda Maaliyadda, Bangiga dhexe ee Somaliland iyo guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada.
Gudoomaiayah baanka dhexe ee Somaliland Md cabdi Dirir cabdi ayaa ku macneeyey isbedelka sarifka lacagta shisheeye ee dalka lagu isticmaalo inay dhibato joogto ah ku hayso mujtamaca, kulamadana lagaga hadli doono sidii qiime la ogyahay loogu samayn lahaa sarifka Doolarka Maraykanka isla markaana dawladu siyasad cad uga yeelan lahayd.
Wasiirka wasaaradda Maaliyadda Md. Cabdicasiis Maxamed Samaale oo isna kulanka maanta ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaradda maaliyaddu ay taageero diyaar ula tahay baanka dhexe iyo hay’adaha kale ee ku shaqada leh waxii lagu maareynayo sicir bararka lacagaha qalaad, halka sidoo kalena wasiirku u gudbiyey guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada warbixin ku saabsan miisaaniyad sanadeedka qaranka. Taasoo uu ku tilmaamay in ku talo galkii miisaaniyaddu uu sadexdan bilood ee u horeeya sanadka uu u soo baxay sidii loogu talo galay.
Gudoomiayaha Gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland Md. Maxamed Xaaji Maxamuud Cumar Xaashi ayaa isna kulanka manta ka sheegay in la sii wadi doono kulamada noocan ah ilaa xal loo helo mashaakilaadka ku saabsan sicir bararka.